Onyinye Banggood dị elu - izu nke Septemba 24 ruo 30, 2018 | Gam akporosis
Onyinye Banggood dị elu - izu nke Septemba 24 ruo 30, 2018
Francisco Ruiz | | Ngwa gam akporo
Kedu ka anyị si mara na teknụzụ na-amasị gị na ọnụahịa dị mma, otu n'ime ụlọ ahịa kachasị mma maka ọnụahịa, ogo na nkwa doro anya Banggood, ma ọ bụ maka otu ihe kpatara na site na ọnwa nke ọnwa Julaị 2017 na site ugbu a na ọnwa ọ bụla, anyị ga-ewetara gị nke kacha mma Banggood na-enye emelitere kwa izu.
Yabụ kwa ọnwa ị ga-enwe ike ịchọta bipụtara post a site na Top na-enye Banggood, nke a ga-emelite kwa izu iji mejuputa onyinye ndị kachasị adọrọ mmasị na otu izu ahụ anyị nwere ike ịchọta na ụlọ ahịa na-ewu ewu n'ịntanetị nke ndị China nwere ọnụahịa na-asọ oyi. Anyị chọrọ ịkwado ndị budata ma wụnye ngwa Banggood ebe ọ bụ site na ya, na mgbakwunye na ịnweta a 10% ego ọzọGa-enwe ohere tupu onye ọ bụla ọzọ enye onyinye na koodu ego nkwado na-adị naanị site na APP. Echefula na, ọ bụrụ na ị bụ onye ọrụ Telegram, anyị nwere ọwa nke ahịa na onyinye nke anyị gụnyere gụnyere teknụzụ kachasị mma anyị na-anakọta na ụlọ ahịa dị n'ịntanetị dị iche iche.
1 Onyinye si izu nke September 24 ruo 30
1.1 Ego na ngwa BlitzWolf
2 Onyinye si izu nke September 17 ruo 22
2.1 LeEco Le2 X526 dị ọnụahịa $ 99,99 n'izu a
3 Onyinye si izu nke September 3 ruo 9
3.1 UMIDIGI Otu maka naanị euro 146,16
3.2 UMIDIGI Otu Pro maka naanị euro 171,95
3.3 Elephone S7 na mbelata 25% na ọnụahịa nke euro 94,57
3.4 LEAGOO S9 na 18% ego na ego nke 120,36 euro
3.5 DOOGEE MIX 2 na ego 33% na ego nke euro 171,95
3.6 Nubia M2 Lite na ego 31% na ego nke euro 91,13
Onyinye si izu nke September 24 ruo 30
Ego na ngwa BlitzWolf
Ọ bụ otu n'ime ụdị ndị ama ama na ngwa na njikọ ya. N'ihi Banggood, anyị na-ahụ ọtụtụ usoro nkwalite na ngwaahịa ha. Eriri USB, ihe nkwụnye ọkụ, batrị ndị ọzọ ma ọ bụ chaja bụ ụfọdụ ngwaahịa na ụlọ ọrụ ahụ hapụrụ anyị n'ọkwá ndị a. Yabụ ọ bụrụ na ị na-achọ otu, nke a bụ oge kachasị mma maka ya.
Nkwalite ndị a dịgasị iche iche. Ego nke ihe ruru 70%, ngwaahịa n'efu maka ịzụta 2 ma ọ bụ karịa ngwaahịa BlitzWolf ma ọ bụ ego maka ịzụta ọtụtụ ngwaahịa. Nkwalite zuru oke, dị n'izu a. Ekwela ka ọ gbapụ!
Onyinye si izu nke September 17 ruo 22
LeEco Le2 X526 dị ọnụahịa $ 99,99 n'izu a
Otu n'ime ụdị ndị ama ama na Asia na-ahapụ anyị ụdị ọhụụ ya na ọnụahịa kacha mma. Ọ nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa, na n'ime ya na-echere anyị ihe nhazi Qualcomm Snapdragon 652, otu n'ime ihe kachasị ezu nke ọkara nke akara ndị China. Ọ nwere 3 GB Ram na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Igwefoto azụ bụ 16 MP na onye ihu bụ 8 MP. Anyị nwere akara mkpisiaka aka na ekwentị yana ọ na-apụtakwa maka ngwa ngwa ya.
Ekwentị dị na nkwalite a na Banggood na ego nke 99 dollar. A na-enweta ya maka otu izu na nnukwu ego a.
Onyinye si izu nke September 3 ruo 9
UMIDIGI Otu maka naanị euro 146,16
N'ime izu a dum, n'etiti onyinye Banggood anyị ga-eme ka UMIDIGI pụta ìhè, ọnụ ọnụ ya na ihuenyo 5,99 nke nwere mkpebi HD + na akụkụ nke 19: 9. N'ime, anyị na-ahụ Helio P23 processor sitere na MediaTek tinyere 4 GB nke RAM na 32 GB nke nchekwa.
N'adịghị ka ndị ọzọ Asia ọnụ, nlereanya a bụ dị na gam akporo 8.1, ihe na - esiri ike mgbe ụfọdụ ịchọta n'etiti ụdị ndị nrụpụta a. Igwefoto dị n'ihu na-eru 16 mpx, ebe sistemụ igwefoto azụ nwere oghere 12 mpx na oghere 5 mpx, nke anyị nwere ike iji nweta eserese mara mma.
UMIDIGI Otu Pro maka naanị euro 171,95
UMIDIGI One Pro, ihe nlere nke a na-enyekwa maka obere oge, na-enye anyị ihe dịka atụmatụ ndị anyị nwere ike ịchọta na ụdị Onye ahụ, nwere ihuenyo 5,99 nke HD +, gam akporo 8.1, MediaTek Helio P23 processor na 4 GB nke Ram. Isi ihe dị iche, anyị na-ahụ ya na ebe nchekwa, a oghere nke na-abawanye ruo 64 GB, kama nke 32 GB nke otu Onye nyere. modelsdị abụọ ahụ na-enye anyị ohere ịgbasa ebe nchekwa ahụ ruo 256 GB na-eji kaadị microSD.
Elephone S7 na mbelata 25% na ọnụahịa nke euro 94,57
Anyị na-amalite onyinye ndị a na otu ụdị dị mkpa nke akara ndị China. Nwere a 5,5-inch ihuenyo ma jiri Helio X25 dị ka ihe nhazi. Banyere RAM, ọ nwere 4 GB otu ma nwee 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Ọ nwere otu igwefoto 13 MP n'azụ. Ihe nlereanya a pụtara ìhè maka ịnwe ihe mmetụta mkpịsị aka nwere njikọta n'ihu.
Banggood na-ewetara anyị ihe nlere a ọnụahịa nke 94,57 euro na nkwalite a. Ọ na-aghọ a 25% ego Ekwela ka ọ gbapụ!
LEAGOO S9 na 18% ego na ego nke 120,36 euro
LEAGOO bụ akara na - emepụta niche na ahịa na Europe, ekele maka ụdị dị ka nke a. Ndi nwe a 5,85-anụ ọhịa ihuenyo na Full HD + mkpebi, nke doro anya na ọ bara ezigbo uru ịhụ ụdị ọdịnaya niile na ya. Dị ka ihe nhazi ha ahọrọ MTK6750, tinyere 4 GB Ram na 32 GB nke nchekwa dị n'ime. Ekwentị pụtara maka imewe ya, ya na ọkwa na ihuenyo. Ezigbo ihe nlereanya, nke nwere oke mma.
Banggood na-ewetara anyị ihe nlere a na ọnụahịa nke 120,36 euro na nkwalite a. Ọ gụnyere ego nke 18% karịrị ụgwọ mbụ ya.
DOOGEE MIX 2 na ego 33% na ego nke euro 171,95
Branddị ọzọ na-aga n'ihu n'ahịa bụ DOOGEE. Ekwentị a nwere nha ihuenyo dị ka sentimita 5,99. O nwere Helio P25 dị ka ihe nhazi, tinyere 6 GB nke RAM na nchekwa dị n'ime nke 64 GB. Ihe nlereanya a pụtara ìhè maka ịnweta batrị 4.060 mAh buru ibu, nke na-enye ndị ọrụ ọtụtụ nnwere onwe. N'etiti ụfọdụ n'ime ọrụ ya kachasị pụta ìhè, anyị na-ahụ mkpọghe site na njirimara ihu na igwefoto azụ abụọ.
Na Banggood, anyị hụrụ ekwentị na a ọnụahịa nke 171,95 euro na nkwalite a. Akwa Ntinye ego 33% jiri ya tụnyere ọnụahịa mbụ ya.
Nubia M2 Lite na ego 31% na ego nke euro 91,13
Nubia M2 Lite bụ otu ihe ahụ, mana n'ime ya anyị agaghị ahụ igwefoto abụọ nke Nubia M2
Nubia bụ otu ụdị ndị ahụ ọtụtụ maara ma dịrị n’ahịa ruo oge ụfọdụ. Ha na-ahapụrụ anyị nnukwu nhọrọ nke ụdị nke ọkwa niile. Otu ụdị ya bụ M2 Lite a. Ekwentị nwere ihuenyo 5,5-anụ ọhịa. Dị ka ihe nhazi ọ na-eji MTK6750, tinyere 3 GB RAM na 64 GB nke nchekwa dị n'ime. Igwefoto azụ bụ 16 MP na n'ihu 13 MP, ka anyị wee nwee ike ịwe nnukwu onyonyo.
Banggood na-ewetara anyị ihe nlere a ọnụahịa nke 91,13 euro na nkwalite a. Ntinye ego 31% ma e jiri ya tụnyere ọnụahịa mbụ ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Onyinye Banggood dị elu - izu nke Septemba 24 ruo 30, 2018
Edere ihe niile a na Banggood ahịa peeji, yana ọ bụrụ na ọ bụ mbupu na Spain ma a na-arịọ mbupu ụgbọ mmiri, nke na-ewe ihe dị ka otu ọnwa ka iwu gị wee rute, ha anaghị akwụ gị ụgwọ mbupu ma ọ bụ ụgwọ kọstọm n'ọtụtụ n'ime ikpe.
Ọ bụrụ n’ị jụọ ya site na Ọrụ Express, ọ na-enyekarị ya DHL ma ọ bụrụ na ị tufuoghị ọnụ ahịa kọstọm. Dịka ọmụmaatụ, achọrọ m Mi A1 ngwa ngwa iji mepụta nyocha vidiyo ngwa ngwa o kwere mee ma ha ebubo m 35 Euro maka mmefu ndị kọstọm.
90 $ Achọpụtara m na ọ gabigara oke ma nke ahụ abụghị Banggood ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụtụ isi nke obodo gị na-akwụ ụgwọ.
Ekele enyi !!!